Ukuba uziva ulinganiselwe yiGoogle Analytics, Piwik isenokuba yenye indlela ebalaseleyo Uluntu lwasePiwik edition ngumthombo ovulekileyo kubahlalutyi Isixhobo esiza nohlaziyo oluqhelekileyo kunye nokukhutshwa okutsha simahla. IPiwik PRO kwiNdawo kubandakanya izinto ezahlukeneyo kunye neenkonzo zepremiyamu. IPiwik PRO ikwabonelela nge- isisombululo sefu (apho usenayo idatha) ukuba awukwazanga ukuyisingatha ngaphakathi. IPiwik igcwele Ukuthelekiswa kwesisombululo ngasinye kwindawo yabo.
U-Piwik ukhuphe i-infographic ngazo zonke izibonelelo abazibonisayo ngaphezulu kohlalutyo lukaGoogle. Kuyavunywa, oku kukukhuphela infographic. Uhlalutyo lukaGoogle luyabonelela UGoogle Analytics 360 kumthengi weshishini. Kwaye akufuneki ihambe ngaphandle kokuchaza ukuba uGoogle unelungelo lokudityaniswa kweWebmaster kunye neAdwords umboneleli owahlukileyo angaze abonelele.